ဝိနည်းအကျင့်ကို အကြောင်းပြု၍ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ဂိုဏ်းအမျိုးမျိုးကွဲပြားခဲ့၏။ ယခု ၀ိနည်းကို အကြောင်းပြု၍ ထေရ၀ါဒ၊ မဟာသဗ္ဗတ္ထိဝါဒနှင့် ဓမ္မဂုတ္တိကဂိုဏ်းသံဃာတော်တို့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလတွင် ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြတော့မည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်များတက်ရောက်ခွင့်မရှိဘဲ ထေရ၀ါဒ၊မဟာယာနနှင့် တိဘက် သာသနာ့ဝန်ထမ်းများသာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြမည့် သမိုင်းဝင်ညီလာခံကြီးတစ်ခုအဖြစ် အားခဲပြင် ဆင်နေကြသည်။ သူလည်း ညီလာခံတွင် တင်သွင်းဖတ်ကြားရန် စာတမ်း တစ်စောင် အပူတပြင်းရေး (ကူး)နေရသဖြင့် ပို့စ်အသစ်မတင်နိုင်...။ ဤသည်ပင်လျှင် ပို့စ် အသစ်ဖြစ် ကောင်းဖြစ်ပေရာ၏ ဟူလိုသော်၊ ပုဒိအာနှင့် ပြည့်စုံရပါလို၏တည်း။ သာဓု သာဓု သာဓု...။
Dear Ven. Vicittasara,
It isapleasure to announce that the Central University of Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi is going to organize an International Conference on “Vinaya” from 17-19 January, 2011. The monk scholars from all the existing three traditions of the Vinaya viz., Theravada, M¨lasaråstivåda and Dharmaguptika will participate the conference and deliberate on various areas of Vinaya. His Holiness the Dalai Lama has kindly consented to grace the occasion and inaugurate the conference.
On behalf of the University, the organizing committee, would like to invite you to this conference and request you kindly makeapresentation on "Varshavaasa & Nivarana" which will be followed by discussion. The concept note is enclosed herewith.
We are looking forward to this conference, which is, perhaps, the first time in modern era where the Sangha members belonging to all the three Vinaya traditions will gather and deliberate on the living traditions based on the Vinaya texts which have slight differences in their traditional versions.
We also request you kindly send your paper latest by 15th December 2010 so that the papers can be made ready for the participants on time.
We shall be grateful if you could send your consent as soon as possible . The University will be happy to bear the travel expenses (Air: economy class) and the local hospitality.
Yours profound veneration
Lobsang Norbu Shastri
Central University of Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 10:55 PM
သာဓု သာဓု သာဓု။ ဗုဒ္ဓသာ သနာ အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲပါစေ။စစ်မှန်သော ဓမ္မအား ဂိုဏ်းပိုင်းပေါင်းစုံ မှဆက်လက် ထိန်းသိမ်းပြန့်ပွား အဓွန့် ရှည်ပါစေဘုရား။